Dagaal ka dhacay deegaanka Far-Shabeelo oo xiga dhanka Buraan iyo Dhahar | maakhir.com
July 30, 2007 in Maakhir, Somalia | Tags: , Buran, Maakhir, Puntland, Somalia
oo ay iskaga hor yimaadeen ciidanka la dagaalanka Xaalufinta degmada Dhahar iyo Qowlaysato kasoo jeeda deegaanka Qardho iyo Bariga fog.
Dhahar: Aroornimadii saaka kaaha waaberi ayaa waxaa ka ambabaxay degmada Dhahar odayaal dhaqameed tegay deegaanka Far-Shabeel oo ay ka socotey gubida Dhirta oo ay gubayeen rag qowlaysato ah oo ku hagoogan dareyska mulatariga Puntland Heybtooduna tahay beesha Majeerteen, kuwaasoo rasaas ooda kaga qaadey Odayaal Dhaqameedkii ka tagay Magaalada Dhahar, halkaasoo ay ku dhaawacmeen laba Oday oo kasoo jeeda degmada Dhahar: Cali Daahir Qodax oo ah Dhaawac aad culus ayaa waxaa isla markiiba la keeney Isbitaalka Weyn ee degmada Dhahar.
Isla duhurkii ayaa waxaa magaalada Dhahar ka baxay ciidamo Huwan ah oo Sita Gawaarida Gaashaaman, Waxaa kaloo raacay warbaahinta gobolka Sanaag iyo odayaal dhaqameed. Ciidankaan ayaa waxay iskaga horyimaadeen maleeshiyada usoo tafaxeydatey xaalufinta dhirta iyo deegaanka meel lagu magacaabo Far-Shabeel.
Isbitaalka Guud ee Dhahar
‘Kadib markii la isku fara saarey deegaankaas oo ah meel looga amriyo Degmada Dhahar ayaa waxaa dagaalkii looga dilay ciidamada Qowlaysatada ah oo iyagana aad u hubeysnaa 4 qof. Waxaa laga soo qabtey gaari noociisu yahay IZUZU. Iyo laba nin oo maxaabiis ah oo kasoo kala jeeda Cali Jabraahiil iyo Cismaan maxamuud ee beesha Majeerteen.
Dhanka Ciidanka Ladagaalanka Xaalufinta ayaa waxaa kasoo gaarey laba dhaawac ah, ciidankaasoo caawa kusoo hoyday magaalada Dhahar.
Ciidamada Qowlaysatada ah oo la furdaamiyey ayaa waxay firxadkooda kusii carareen deegaanka Alxamdulilah oo ah xarun militari oo ay leedahay Maamulka Puntland. Dhanka kale Ciidamadaan qowlaysatada ah ayaa sheegtay in aan mishaar lasiinin mudo 8 bilood ayna ku kaliftey iney ka shaqeystaan ka ganacsiga dhuxusha si ay nooli uga soo saartaan. Ciidamadaan ayaa horey waxay usoo xaalufiyeen deegaanada Bariga Fog: Isku shuban, Caluula, Xaafuun, Beyla IWM, oo haatan aan geed lagu reebin.
Sikastaba ha ahaatee, Maha markii ugu horeysay oo ay ciidamada ladagaalanka Xaalufinta iyo maleeshiyada xaalufiyayaasha ah oo laga awooda roonaaday ay isku maandhaafaan deegaanada Galbeedka Bari iyo Gobolka Sanaag. Waxaa suura gal ah in ciidamada raga laga soo qafaashay ay soo rogaal celiyaan maalinta bari ah.
Kala soco Dhaha.com/laasqoray
« Corruption in Puntland
“Fighting over illegal logging kills one in northwest Somalia »